computerသင်တန်း အား ရန်ကုန် တွင်​ ipivi.com မှတဆင့်​ ဝယ်​ယူပါ။
ရောင်းချသူ: Aye Than Aye
May (28)ရက်နေ့ တန်းခွဲသစ် စပါမယ်နော်
အမြန်လေး လာအပ်ထားမှ စိတ်ချရမယ်နော်
1.Computer Basic Course
သင်တန်းကာလာ - ၅ရက်
သင်တန်းကြေး - ၂သောင်းကျပ်တိတိ
2. Adobe Photoshop Course
3. Adobe Illustration Course
4. Excel Special Course
သင်တန်းကြေး - ၂သောင်း၅ထောင်ကျပ်တိတိ
သင်တန်းနေရာ - အမှတ် (3B),
(ဒဂုံစင်တာနဲ့ ဂမုန်းပွင့်ကြား)၊ မြေနီကုန်း၊ စမ်းချောင်း။
ဖုန်းနံပါတ် - 01 534773, 09 444690792,
09 253263006, 09 457503853 သို့
ဆက်သွယ်စုံစမ်း မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်နော်။ (>‿)
HP Pavilion Notebook Core i7 7th...